Ọsọ Mbata: Ọbara Nwanne Gị | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ọsọ ọsọ: ọbara nwanne gị nwoke
di Paolo Tescione - Machị 28, 2021
Ngwa ngwa ngwa, Ọbara nwanne gị nwoke: Ebel bụ onye mbụ e gburu na akụkọ ihe mere eme mmadụ na nwanne ya, bụ Ken, bụ onye mbụ gburu ọchụ. Ọgụgụ Akwụkwọ Nsọ - Jenesis 4: 1-12 “Gee ntị! Ọbara nwanne gị si n’ala na-etiku m. ”- Jenesis 4:10
Olee otú o si mee Ken ime ụdị egwu ahụ? Cain ama ayat esịt onyụn̄ ayat esịt ke ntak emi Abasi m didkenyịmeke ndiwa uwa esie. Ma Ken enyeghị Chineke nke kachasị mma nke mkpụrụ ala ya. Chineke gwara Ken na ihe ọ chọrọ ime bụ ihe dị mma, ma Ken egeghị ntị. O jideghị iwe ya ma ọ bụ ekworo wee gbuo nwanne ya.
Ọ bụ ezie na iwe nwere ike ịbụ otu n’ime àgwà anyị bu pụta ụwa, ọ dị anyị mkpa ịchịkwa ya. Anyị nwere ike ịbụ iwe, ma ọ bụ ihe ihere ịghara ijikwa iwe anyị.
Ofufe ọsọsọ, ọbara nwanne gị nwoke - azịza Chukwu
Ebel ọ bụ onye ịchọ ọdịmma onwe onye nanị na omume ọjọọ nke Ken nwere. Lee ka ọnwụ ya si kwesị ekwesị! Kedu ihe mgbu dị mgbu n'obi ya mgbe nwanne ya nwoke gburu ya? Ọ bụrụ na anyị kpọrọ ụdị ozi ahụ asị maka ozi Chineke site n'okwukwe, olee ihe ọ ga-ewute anyị?
Chineke na-aghọta ihe mgbu anyị naikpe na-ezighị ezi na site na mgbu. Onye-nwe wee sị, “Gịnị ka ị meworo? Gee ntị! Ọbara nwanne gị si n’ala na-etiku m. ”Abasi ama ọfiọk ubiak Abel onyụn̄ anyan̄a enye.
Anyị ga-aga ụzọ okwukwe, nte Abel eketiede. Chineke ga-eduzi usoro anyị, mara nhụjuanya anyị ma soro ikpe ziri ezi.
Ekpere: Chineke, ị ghọtara obi anyị na ihe mgbu anyị. Nyere anyị aka jeere gị ozi ma mee ihe ziri ezi site n’ichebara ndị ọzọ echiche na ịghara imejọ ha. N'ihi na ịhụnanya nke Jizọs, Amen.
Inwe ezigbo ụkpụrụ: ekpere siri ike maka amara sitere n'aka Jizọs
Jizọs kwuru, sị: nne m anaghị agọnarị amara ọ bụla nye ndị na-ekpe ekpere a
Onye ọbụla gụpụtara chaplet a ga-enweta amara pụrụ iche
Feast of Mercy Sunday 11 Eprel: kedu ihe ị ga-eme taa?
Isi nke Roses M dara ngwọrọ ugbu a, m na-eje ije!
Ekpere a na-enwetụbeghị ụdị ya iji gbochie mmechuihu gị
Nraranye nke Pope Francis nye Senti Joseph na-ehi ụra